Midowga Africa oo maanta doortay gudoomiye cusub waa kuma?. – Radio Daljir
Janaayo 30, 2017 9:12 b 0
Adis Ababa, Jan 30 2017-Shirka Midowga Afrika ee ka socda Magaalada Addis Abba ee dalka Itoobiya ayaa waxaa lagu doortay Gudoomiyaha cusub ee badeli doona Gudoomiyaha hadda xilka heysa oo ka soo jeedda dalka Koonfur Afrika.
Codeyn ay sameeyeen xubnaha guddiga Midowga Afrika ayaa waxaa si lama filaan ah ugu soo baxay wasiirka arimaha dibada dalka Chad.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Chad Moussa Faki Mahamad ayaa silama filaan ah ugu ku guuleystay gudoomiyaha midowga Afrika , waxaana uu ka guulestay Amino Maxamed wasiirada arimaha dibada Kenya.
Dowladda Kenya ayaa lagu waday in ay ku guuleysato Gudoomiyaha Midowga Afrika, waxaana madaxda ugu sareysa Kenya ay safaro badan ku bixiyeen in ay guuleysato Aamino.